सत्यजित रे-का ५ फिल्म - खबरम्यागजिन
Homeमनोरञ्जनसत्यजित रे-का ५ फिल्म
February 2, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मनोरञ्जन 0
१. पाथर पन्चली
विभूतिभूषण बन्धोपाध्यायको उपन्यासमा आधारित ‘पाथर पन्चली’ बंगाली फिल्म हो। फिल्मको कथा बंगालको एक ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने अपु र उनकी दिदीको हो। गरिबी र अभावमा ती दुईले जीवन बिताउँछन्। अपुमाथि परिवारलाई हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थपिन्छ। फिल्म २०औं शताब्दीको सुरुआतमा असुविधा र अभावबीच बाँचेका दुई दिदीभाइसँग सम्बन्धित छ। प्रकृतिप्रेम, सामाजिक र मानवीय संवेदना फिल्ममा देखाइएको छ।
२. अपुर संसार
उच्च माध्यमिक तह मात्रै अध्ययन गरेका अपु लेखक बन्न चाहन्छन्। उनी नयाँ जागिरको खोजीमा हुन्छन्। अभाव र गरिबी झेलिरहेका हुन्छन् उनी। त्यसै बेला उनको साथी सहरबाट आउँछन्। त्यो साथीले अपुलाई आफन्तको बिहेमा लिएर जान्छन्। तर, बिहे अचानक भाँडिन्छ र अपु अप्रत्याशित ढंगले दुलाहा बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अपुको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन आउँछ।
सत्यजित रोयको मास्टरपिस फिल्मका रूपमा लिइने ‘चारुलता’ रवीन्द्रनाथ टैगोरको कथा हो। फिल्ममा एक भारतीय सम्भ्रान्त महिलाको कथा छ। अध्ययनमा मात्रै व्यस्त हुन चाहने आफूभन्दा जेठो श्रीमान् र ठूलो बंगलामा एक्लै उदास बस्नुपर्ने प्रमुख पात्र चारुको अवस्था फिल्ममा चित्रित छ। चारुकै उमेरको एक युवाको आगमन भएपछि फिल्ममा नयाँ मोड सुरु हुन्छ।
सन् १९५६ मा बनेको फिल्म ‘अपराजिता’ गाउँबाट सहर बसाइँ सर्ने मानिसको कथा हो। प्रमुख पात्रको बुवा गंगा नदीमा पुजारीका रूपमा काम गर्छन्। उनको बुवा बिरामीले थलिन्छन्। आमाको पनि अवस्था राम्रो हुँदैन। त्यसपछि उनीहरू फेरि गाउँ फर्किन्छन्। फिल्म पढाइका लागि गाउँ छाड्ने र आमाले बिताएकी एक्लोपनसँग सम्बन्धित छ।
५. द बिग सिटी
सन् १९६३ मा रोयले बनाएको यो फिल्म मध्यमवर्गको परिवारसँग सम्बन्धित छ। मध्यम वर्गकी श्रीमतीको प्रवेश भएपछि परिवारमा हुने परिवर्तनलाई फिल्ममा देखाइएको छ। सन् १९५० को कलकत्ता सहरको मध्यमवर्गीय महिलामा आएको परिवर्तन फिल्मको केन्द्रीय विषयवस्तु हो। फिल्मले पुराना मान्यता भएका परिवारलाई प्रहारको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ।